Senotor sharci darro ku tilmaamay go’aankii Puntland fariina u diray | Somsoon
Home WARAR Senotor sharci darro ku tilmaamay go’aankii Puntland fariina u diray
Maxamuud Mashruuc oo ka mid ah Senatorada Aqalka Sare ee maamulka Puntland ku matala dowladda federaalka, ayaa sharci darro ku tilmaamay warqad ka soo baxday Wasaaradda Arimaha Gudaha Puntland oo lagu mamnuucay in xafiis ay Puntland ka furtaan wax xil ka haya dowladda dhexe.
Go’aankaan ayaa ku soo beegmay, kadib markii Wasiirka Qorshaynta Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka, Jamaal Maxamed Xasan uu xafiiska u qaabilsan xiriirka bulshada ka furtay gobolka Sanaag.
Senator Mashruuc ayaa sheegay in go’aanka ka soo baxay Puntland uu ka hor imaanayo dastuurka dalka qodobkiisa 61aad farqadiisa 2aad, kaas oo qeexaya waajibaadka iyo matalaada xildhibaanada federaalka.
“Kala duwanaashaha fikirka nooca doorashada dalka ka dhici doonta 2020/21 ama in mudanahu ka fikir siyaasad duwan yahay xukuumadda Puntland looma adeegsan karo is hor taagga xuquuda matalaadda xubnaha Baarlamaanka Federalka Soomaaliya iyo deegaan doorashadooda,” ayuu yiri Senotor Mashruuc.
Wuxuu ugu baaqay madaxda sare ee maamulka Puntland in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara midnimada qaranka Soomaaliyeed, isagoo carabka ku dhiftay in Puntland uu xasuusiyo in ay xubin ka tahay maamul goboleedyada kale ee dalka, kuwaas oo dhamaantood hoostaga dawaldda federaalka Soomaaliya, xubno matalana ay haatan ku leedahay dowladda.
Article horeSheikh Soomow: “Taliyaha Booliiska Maxkamadd baan la tiigsanayaa”
Article socoda Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in aysan istaagin gar-gaarka iyo ganacsiga isaga gudba xuduudaha